आज गुरु पूर्णिमा, कस्का गुरु को ? « Ramailo छ
आज गुरु पूर्णिमा, कस्का गुरु को ?
प्रकाशित मिति : Jul 27, 2018
समय : 1:28 pm
आज गुरु पूर्णिमा । जीवनमा सही बाटो देखाउने र सदबुद्धी दिने व्यत्तिलाई सम्झिने या पूज्ने दिन । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा चाहिं कस्का गुरु को हुन् त ? कसले कसलाई गुरु मानेर पूज्ने गरेका छन ?
‘दर्पण छायाँ’ अभिनेत्री निरुता सिंहले निर्देशक तुलसी घिमिरेलाई आफ्नो गुरु मान्दछिन् । उनले निर्देशक घिमिरेसँगका तस्बिर आफ्नो फेसबुकमा सेयर गरेकी छन् । तुलसीको निर्देशनमा निरुताले धेरै सुपरहिट फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् । यस्तै नायिका, निर्मात्री तथा निर्देशक रेखा थापा निर्देशक नरेश पौडेल र निर्माता छविराज ओझालाई आफ्नो गुरु मान्छिन् । नरेशको निर्देशनमा छविराजले निर्माण गरेको फिल्म ‘हिरो’बाट रेखाले रजतपटमा डेव्यु गरेकी थिइन् ।
निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरीका गुरु निर्देशक दिनेश डिसी हुन् । डिसीसँगको फोटो राखेर दीपकले बिहानै आफ्नो गुरुलाई सम्झिएका छन् । दिनेश डिसीका गुरु भने हाँस्य व्यांग्य कलाकार सन्तोष पन्त हुन् । अभिनेता सौगात मल्लका गुरु वरिष्ठ नाट्यकर्मी सुनिल पोखरेल हुन् । पोखरेललाई सौगात मल्ल र दयाहांग राई लगायत धेरै गुरुकुलका कलाकारले गुरु मान्दछन् ।
नायिका पूजा शर्माले निर्देशक सुदर्शन थापालाई आफ्नो गुरु मानेकी छन् । सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको फिल्म ‘मधुमास’ बाट पूजाले आफ्नो करिअर सुरु गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले थापाकै निर्देशनमा ‘चंखे शंखे पंखे’, ‘प्रेम गीत’ र ‘रामकहानी’ खेलिन् ।
बाल कलाकार अनुभव रेग्मीका गुरु निर्माता तथा निर्देशक विका आचार्य हुन् । विकास र अनुभवले ‘रिदम’ देखि ‘नाईं नभन्नू ल ५’ सम्म सहकार्य गरिरहेका छन् । सबै गुरुप्रति नमन !